Home / Magazine / Features Library / Mining in Zimbabwe← Back
SA supplier recruits Zim representative
By: Samantha Herbst 7th September 2012 Local steel tube and pipe manufacturer Robor is optimistic about there being significant expenditure on Zimbabwe’s mines, as various mining houses start recapitalising and rebuilding their operations. The manufacturer has recruited a Zimbabwean representative to facilitate the company’s growth in... →
By: Joanne Taylor 2nd September 2011 Only two diamond mines in Zimbabwe are certified by industry and civil society the Kimberley Process to export diamonds, namely Murowa mine, which is owned by international mining company Rio Tinto and the River Ranch mine, owned by a Dubai-based mining company. →
2nd September 2011 The Zimbabwe government and business services company Essar Africa Holdings Limited (EAHL) have launched two new entities, NewZim Steel (NZS) and NewZim Minerals (NZM). →
Third mining indaba to reveal all
By: Joanne Taylor 2nd September 2011 The mining industry in Zimbabwe has experienced interesting developments since the first Zimbabwe Mining Indaba was held two years ago, says Utho Group executive director Sheila Galloway, who adds that the potential of the country’s mining industry is unparalleled globally, with forecast... →
Political uncertainty hampering investments
By: Joanne Taylor 2nd September 2011 Consulting engineers SRK Consulting is taking part in the Zimbabwe Mining Indaba in September, this time with a stand to engage with potential clients more effectively. →
Risks of mining in Africa
2nd September 2011 The eagerness with which global miners are investing in Africa, including Zimbabwe, belie the risks that operating mines on the continent hold for the unwary investor, states a press release from insurance broker Alexander Forbes Risk Services. →
Reopened gold mine exceeding expectations
2nd September 2011 Mwana Africa’s Freda Rebecca Gold Mine (FRGM) has just completed Phase 2 of the construction programme on schedule and on budget. →
Diamond mine expanding facilities
2nd September 2011 Prefabricated buildings provider Prefab Design Services has secured a project to supply and erect fully equipped prefabricated kitchen and dining facilities at Zimbabwe mine Mbada Diamonds near Hotsprings, Mutare. →
By: Tracy Hancock 2nd September 2011 Advisor in mineral valuation and statutory compliance Venmyn says the controversial Indigenisation and Economic Empowerment Act, No 14 of 2007, promulgated by the Zimbabwean government, contradicts accepted mineral resource reporting practices. “The legislation will result in many unintended... →
Prospective projects for Zimbabwe
2nd September 2011 A number of mining projects are currently under way in Zimbabwe, and are expected to attract foreign investment into the country, a press release from networking forum Africa Exchange reports. →
Indaba to focus on Zimbabwe’s business environment
By: Jonathan Faurie 3rd September 2010 The second annual Zimbabwe Mining Indaba will focus this year more on the business-operating environment in Zimbabwe, rather than the country’s political landscape, reports Indaba organiser Utho Capital. →
Chamber eyes 30% growth for 2010
By: Jonathan Faurie 3rd September 2010 The Zimbabwe Chamber of Mines reports that the country’s mining industry could grow by as much as 30% in 2010, should power availability improve within the country and if more working capital is made available to mining companies. →
Cape Town DRC SHANGHAI Brisbane Construction Dortmund Gold JAKARTA Johannesburg LUSAKA Perth SANTIAGO Tembagapura Ulaanbaatar Gauteng Expertise Dubai Rustenburg Pretoria Phoenix Moscow Belfast Atlantic Business East Rand Water Care Company Education Industrial Rand Water Resources Sanitation ... more
pqt: 1.468s - ct: 2.15s - 1284pq - 3rq